शिवलिंग- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
माघ १०, २०७७ सविता विमली
सभ्यताको आदिम सिर्जनाको
यसलाई लिंग मात्र भन्नेहरु छन्
म भने देखिरहेछु
जुन योनिको आधार
नलिई उभिन सकेको छैन
तिमीले पुज्ने गरेको लिंग पनि !
यो त आदि जोडीको
अनादि प्रेमको प्रतीक हो !
यो हो एक आदि ‘अर्ग्याजम’ को
अभूतपूर्व दृश्य !
जुन तिमीले न कहिल्यै देख्यौ
न फेरि देख्नेछौ !
भगको भोगले नै
भगवान् र भगवतीहरुले पनि पुजेको
शिवलिंग मात्र लिंग कसरी हुन सक्छ ?
भन्नेहरुले लिंग मात्रै भनिरहे पनि
यो योनि हो
सृष्टिको आदि योनि
उदात्त, उन्मत्त, उन्मुक्त प्रेमको स्मारक !
जब दृश्यलाई पनि झूटो
र, भनियो मात्र लिंग
त्यहीँदेखि नै एककाँधे
बनेको हो यो समीकरण
जसले गरेन सम्मान
र, गरिरह्यो पटकपटक घात मात्रै !
र, तिम्रा कृत्यहरु !!
यो धराका तमाम योनिहरु
जो अलिखित सृजनशक्ति
र, अवर्णनीय परमानन्दका
लागि जन्मिएका हुन् !!
यो तृप्तिको कुनै मूल्य छैन
यो प्रेमको अर्को कुनै नाम छैन !!
प्रकाशित : माघ १०, २०७७ ०८:४७
५० वर्षअघिको कर्णाली
‘पेसेवर’ हरूकै अनुवाद टीठलाग्दा
जंगबहादुरको त्यो जनगणना
‘तिम्रो सुन्दर रूपमा बस्छु म’